Xisbiga Hor-U-Socod iyo mustaqbalka siyaasadeed ee CABDI WELI GAAS - Caasimada Online
Home Maqaalo Xisbiga Hor-U-Socod iyo mustaqbalka siyaasadeed ee CABDI WELI GAAS
Xisbiga Hor-U-Socod iyo mustaqbalka siyaasadeed ee CABDI WELI GAAS
Shirkii golaha iskaashiga dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa shalay lagu soo geba-gebeeyey magaalada Garoowe ee xarunta Puntland.
Shirka waxaa ka qaybgalay hoggaamiyaasha Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Puntland waxaa ka maqnaa Hirshabelle oo sheegtey in ay golaha uga baxday markey tixgeliyeen danahooda khaaska ah.
Xisbiyada laga diiwaan geliyey Muqdisho ayaa ku eg Muqdisho. Dowladda ayaa soo wada iyaduna Xisbi loogu yeero NNP, waxaana muuqata in Xisbiga NPP looga hortagayo kan dowladda federaalku soo wado lana iska horgeynayo laba Xisbi oo ay garwadeen ka yihiin kuwo fashilmey labada dhinacba.
Ugu danbeyn Hoggaamiyaasha Golaha iskaashiga Dowlad goboleedyada ayaa isku raacay shir ay ka soo qaybgalaan Mucaaradka, Xisbiyada, bulshada raidka ah iyo Golaha Iskaashiga, kaas oo ka dhacay Dhuusamareeb, shirka ayaa u muuqda mid cadaadis weyn lagu saarayo Dowladda federaalka caalamkana loo dirayo in Soomaaliya ay ku jirto xaalad siyaasadeed oo cakiran.
Qore: I. Haji Said